Ukuwisa yenye yeemodeli zeshishini ezithandwayo kwezi ntsuku. Izinzile njengomsebenzi obalulekileyo notyalo-mali olusezantsi kunye nokuguquguquka. Nangona kunjalo, ukuseta ivenkile ekwi-intanethi kunye nokubonisa iimveliso zakho akonelanga; Ukukhuthaza nokwoneliseka kwabathengi kudlala indima ebalulekileyo ukwenza naliphi na ishishini liphumelele. Omnye wababoneleli ngeshishini, osebenza njengeqonga elisebenzayo lokusungula ishishini lakho lokurhola simahla kwihlabathi liphela yiNextschain.
I-Nextschain iye yehla kwi-amazon, ebay, aliexpress kangangeminyaka esi-7. Silawula amawaka abathengisi abakumgangatho ophezulu kunye neefektri e-China ukubonelela ngaphezulu kwe-400,000 yeemveliso ezisemgangathweni ophezulu zokuthengisa. INextschain ivumela abasebenzisi ukuba bajolise kwinxalenye yentengiso kunye nentengiso, njengoko iingcali zabo zilawula uluhlu lweempahla kunye nenkqubo yokuthumela. Amaxabiso abo apheleleyo ahamba phambili kwimarike, ebavumela ukuba bafumane inzuzo ephezulu kunye nokunyusa ingeniso yabo.
INextschain ngomnye wabathengisi abalahlayo abambalwa abathumela iiodolo ngobuninzi kwihlabathi liphela ngamaxabiso afikelelekayo. Inkqubo yabo ekrelekrele yamalungiselelo ohlengahlengiso ngokuzenzekelayo kwaye ithumele iiodolo kwangaphambili ngexesha lokuphakama njengoLwesihlanu oMnyama okanye iKrisimesi yokuhanjiswa kwangexesha. Ababoneleli ngeenkonzo abaninzi bahlawulisa ngokushicilela ulwazi lwenkampani yomsebenzisi kwi-invoyisi. I-Nextschain yenza i-invoice ekhethiweyo simahla kuzo zonke iiodolo.
Ngaphezu kwako konke, injongo yethu kukunceda uninzi lweshishini ukunciphisa iindleko kunye nokugcina ixesha elininzi kwishishini labo le-E-commerce. Ngesisombululo sethu sokuyeka into enye, sinceda ukuthenga izinto kubanikezeli bethu, ukukhangela umgangatho, ukupakisha zikwimeko entle kunye nokulawula lonke ulwazi lokulandela umkhondo. Izinto ezenziwa ngabathengisi bethu kukukhulisa ukukhula kweshishini. Ngeenkonzo zokuwisa ezincomekayo zeNextsChain, abathengisi banokujolisa kumgangatho kunye nomgangatho kunye nokunyusa ishishini labo.
Sizama ukufezekisa le njongo ngokwenza lula ukufunwa kwemveliso kwintengiso evelayo yezigidi zabarhwebi abasekwe kwiwebhu abangena kumlo wokuqala kunye / okanye wokukhulisa ishishini lokuthengisa.